Dowladda ingiriiska oo Mamnuucday in Muwaadiniinta Kasoo Jeeda 10 dal oo Muslim ah ay qalabka Elecronigga la raacaan Diyaaradaha Rakaabka ah.
Thursday March 23, 2017 - 09:02:02 in Wararka by
Dowladaha Mareykanka iyo ingiriiska ayaa qaatay go'aanno ay dadka ka imaanaya qaar ka tirsan Waddamada Caalamka islaamka kaga mamnuucayaan in diyaaradaha ay lasoo raacaan qalabka Elecronigga ah ee korontada ku shaqeeya.
Dowladda Mareykanka ayaa mamnuucday in qalabka korontada ku shaqeeya sida Laabtooyada iyo waxyaabaha kale ee Electronigga ah in diyaaradaha ay lasoo raacaan dadka ka imaanaya qaar ka tirsan Mandiqadda ay reer galbeedku u bixiyeen Bariga Dhexe.
Ilo wareedyo ka tirsan Laamaha Socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa Warbaahinta u sheegay in tallaabtaasi ay saameyn ku yeelan doonto dadka ka imaanaya Sagaal ka mid ah Waddamada kuyaalla Bariga dhexe.
Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa kasoo xigatay Saraakiil ka tirsan Wasaaradda ammaanka ee dalka Mareykanka in tallaabtaas muddo dheer laga doodayay, islamarkaana goordhow si rasmi ah loo shaacin doono, iyadoona tani ay markale saameyn ballaaran ku yeelan doonto dadka Muslimiinta ah ee ka imaanaya qaar ka tirsan Waddamada kuyaalla Caalamka islaamka.
Tallaabtani waxay saameyn doontaa 12 ka mid ah Shirkadaha duulmimaadyada ku taga dalka Mareykanka, iyadoona shirkadahaasi badankood ay ka diiwaan gashanyihiin qaar ka tirsan Waddamada Carabta ee kuyaalla Bariga dhexe.
Hey'adda duulimaadka ee dalka Sacuudiga ayaa bayaan ay maalintii shalay soo saartay waxay ku sheegtay in dadka u dhashay dalkaasi ee u safraya dalka Mareykanka inaysan diyaaradaha la raaci karin Laaptoobyada iyo qalabka kale ee Electonigga ah ee korontada ku shaqeeya, waxayna sheegtay in tallaabtaasi ay qaaday kadib markii uu dalab arrinkaas ku aadan uu uga yimid qaar ka tirsan Shirkadaha ay xiriirka la leedahay ee kuyaalla dalka Mareykanka.
Tani iyo intii uu Xafiiska la wareegay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sii kordhiyay cadaadiska dhanka socdaalka ah ee uu saarayo dadka Muslimiinta ah ee uu safaraya dalka Mareykanka, waxaana tani ay imaaneysaa dhowr todobaad kadib markii uu Donald Trump soo saaray Sharci kale oo is hortaag ku sameynaya in dalka Mareykanka ay galaan Muwaadiniinta kasoo jeeda lix dowladood oo kuyaalla Caalamka islaamka.
Dhinaca kale dowladda Ingiriiska ayaa iyana qaadatay go’aan kaas lamid ah oo ay muwaadiniinta 10 wadan uga mamnuucayso in ay qalabka Electonigga ah ay lasoo raacaan diyaaradaha kusii jeeda magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi.